Kudzoka nerunyerekupe rweApple Watch uye kuonekwa kweshuga muropa | Ndinobva mac
Kudzoka nerunyerekupe rweApple Watch uye kuona kweropa glucose
Anonzwa sensor ichave iri inodikanwa zvinoenderana neETNews yeiyo inotevera Apple Watch modhi, ingave iri iyo Series 7 inokwanisa kuyera glucose yeropa. Kuzivana kwepakati MacRumors Iyo inotsanangura zvakare kuti Apple ine muridzi wayo maverengeka patent pane kudzora kweropa glucose ine optical sensor yakagadzirirwa neiyo firm pachayo iyo isina punchi inodikanwa.
Aya marudzi ezviyero anoda inoramba iine glucose yekutarisa yakaiswa mumuviri (CGM) kana kaburi kadiki kacho umo donhwe reropa rinoongororwa zvakananga neyekunze shuga yeropa mita. Zvinotaridza kuti Apple yaizove nehunyanzvi hwekuita iyi mhando yekuongorora pasina chikonzero chekubaya murwere, chimwe chinhu icho nhasi chingave chaicho chinoshanduka kuitora.
Pakati pegore rapfuura 2017 zvakanzi muCupertino timu yemainjiniya yakasikwa iyo yakange yakatsaurirwa kubasa rekusika, kusimudzira uye dhizaini yeiyi isina-invasive sensor. Nekufamba kwemwedzi uye kusasvika kweichi, iyi sarudzo yakaiswa padivi zvishoma asi gore rapfuura Tim Cook akatsanangurira vezvenhau kuti wachi yeApple yaive chaipo pakutanga kwezvavanogona, kuti ivo vaiyedza akasiyana mabasa pfungwa -kuputika uyezve, izvi zvingave zvirizvo.
Apple iri pachena kuti havasi kuzovhura chimwe chinhu nehafu uye ndosaka zvichitaridzika kunge vari kutarisa kutarisa kuvimbika uye kugadzikana kweiyo sensor vasati vaimisikidza pamusika mukati mekugona kweiyo wachi. Chokwadi ndechekuti kuita electrocardiogram kana kuyera oxygen saturation zvinonakidza asi zvinokwanisika kuita "panyama" kutauraIzvo zvinoramba zvichionekwa kana Apple ichizadzisa iyi muyero weropa glucose.
Isu pachedu tine chiremba pakati pevagadziri, Luis Padilla, uye Pese panenge paine musoro wenyaya yekugona kweropa rekuyera glucose yeApple Watch isu tinoti zvingave zvinoshamisa kuti uzviwane. Kufambira mberi kukuru kana zvikawanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kudzoka nerunyerekupe rweApple Watch uye kuona kweropa glucose
Ndakaona kushambadzira kwechimwe chigadzirwa icho chatoita ziya rekuyedza glucose pakuongorora kwavo kwenjere.
Haisi nhau, kuziva apuro, mune zvakawanda zvakagadzirwa, zvinogara zvichidzokera kumashure, zvine mhando yepamusoro.
Apple News inopa bhagi mu macOS Big Sur asi inotozivikanwa kuigadzirisa
Apple TV 6 ichatanga mushure mezhizha